Ukulandela njani ukutya okuthambileyo kwegastroenteritis | Amadoda aQinisekileyo
Ukutya okuthambileyo kwesisu
UMiguel Serrano | | Kufanelekile, ZeMpilo
Ngaba uyazi ukuba kukuthini ukutya okune-gastroenteritis? Kuba iqhelekile, Kulungile ukuba wonke umntu azi ukuba agxile njani kwindlela atya ngayo ngexesha le-gastroenteritis ukunqanda imeko ukuba mandundu kwaye uchache ngokukhawuleza.
Zazi iimpawu zesisu, yintoni ukutya okuthambileyo kwaye ngaphezulu kwako konke Kukuphi ukutya okuvumelekileyo kwaye kokona kulungileyo kunokukuphepha xa unesi sifo.
1 Iimpawu gastroenteritis
2 Kukuthini ukutya okuthambileyo?
3 Ukutya kuvunyelwe kukutya okungafunekiyo kwegastroenteritis
3.1 Hlala unamanzi
4 Ukutya akuvumelekanga
I-Gastroenteritis ikhokelela kukudumba kwesisu kunye namathumbu. Oko kunokubangela iintlungu esiswini, isicaphucaphu, ukugabha, urhudo, intloko kunye nomkhuhlane. Iimpawu zihlala ziphela ngeveki. Ukuba akunjalo, yenza idinga nogqirha wakho ngokukhawuleza. Nangona kunjalo, kuya kufuneka uzolile, kuba sisifo esincinci.
Kutheni sinesifo sesisu? Akukho sizathu esinye, kodwa kukho izinto ezininzi ezinokubangela, kubandakanywa iibhaktheriya, ii-virus, i-parasites kunye nokutya okuthile. Uxinzelelo lunokukhokelela nakwigastroenteritis.
Kukuthini ukutya okuthambileyo?
Ukutya okuthambileyo kunokunciphisa iimpawu zesisu kunye nokunceda umzimba ukubamba ngcono ukutya.. Ukutya okuthambileyo kubonakaliswa kukutya okuncinci kwefayibha. Kwakhona, njengoko igama layo libonisa, kubandakanya ukutya ukutya okuthambileyo. Emva kwexesha, siza kubona ukuba oku kutya kukuthini, kunye nezo kucetyiswa ukuba zikuphephe.
Ukutya kwe-Bland kusetyenziswa kwiimeko apho kunyanzelekile ukukhulula umthwalo wenkqubo yokwetyisa. I-Gastroenteritis yenye yezo meko efuna ukwamkelwa kwesidlo esithambileyo. Kodwa iyanceda ukunyanga ezinye izifo, kubandakanya isifo samathumbu esinganyangekiyo kunye ne-diverticulitis.
Le ndlela yokusondela ekutyeni ayikho ngonaphakade, kodwa kufuneka isetyenziswe okwexeshana de inkqubo yokwetyisa ikulungele ukusebenza ngokwesiqhelo kwakhona. Akucetyiswa ukuyigcina ixesha elide kunokuba iyimfuneko, kuba ayiboneleli ngazo zonke izondlo umzimba ezifuna ukwenza imisebenzi yazo. Ugqirha wakho uya kukwazisa xa ungabuyela kwindlela otya ngayo yesiqhelo. Ngokubanzi, ukutya okuthambileyo kwegastroenteritis kugcinwa kuphela iintsuku ezimbalwa.
Ekugqibeleni, Kuyacetyiswa ukuba uhambe kunye nokutya okuthambileyo. Njengakwezinye iinkqubo, umzimba wakho uyakuxabisa ukukwazi ukugxila kuphela ekubuyiseni.
Ukutya kuvunyelwe kukutya okungafunekiyo kwegastroenteritis
Ukuyila isicwangciso sokutya seentsuku ezimbalwa ukoyisa isisu esiswini? Yongeza ukutya okulandelayo ukuqinisekisa ukuba ufumana ulwelo olwaneleyo, iikhalori, iiminerali eziyimfuneko, kunye nezinye izakhamzimba ezifunwa ngumzimba wakho. bobabini ukuhlala bomelele kwaye bechacha.
Ijusi (iapile kunye neediliya zezona zikhetho zibalaseleyo)
I-infusions (ngaphandle kwe-caffeine): Cinga i-peppermint, ukumiliselwa, ukongeza ekugcwaliseni ulwelo, kunokunceda ekunciphiseni isicaphucaphu. Ijinja sisixhobo esifanelekileyo seetayi zokutya ezithambileyo.
Isonka samasi esitsha
Inkukhu kunye neturkey ngaphandle kolusu (ukubheja ngeendlela zokupheka ezisempilweni)
Umhluzi wenkukhu: Unceda ukuthintela ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni, kunye nokuzalisa ii-electrolyte ezilahlekileyo ngenxa yesifo sorhudo kunye nokugabha.
Ukuba umzimba wakho ubonakalisa iimpawu zokungakulungeli ukutya okuqinileyo kuluhlu, gxila kuphela kulwelo kude kube lelo xesha. Ngokumalunga nokuqina kuluhlu, ukutya okuthambileyo akubonakali ngathi kwahluka kakhulu, kodwa ukuba ukongeza ezinye zazo unokufumana izitya ezinomdla kwisidlo sakusasa, isidlo sasemini kunye nesangokuhlwa. Kwaye khumbula ukuba yeyokwexeshana. Kwiintsuku ezimbalwa, uya kuba nakho ukubuyela kukutya okuthandayo.
Xa une-gastroenteritis, umngcipheko wokuphelelwa ngamanzi emzimbeni uyanda kuba umzimba uphulukana nolwelo oluninzi ngenxa yorhudo kunye nokugabha. Ukuphelelwa ngamanzi emzimbeni kunokwenza imeko ibe mandundu, ke amanzi okusela kunye nolunye ulwelo oluvela kuluhlu olungentla kubalulekile kwizidlo zegland gastroenteritis. Kuyimfuneko ukubuyisela ulwelo olulahlekileyo.
Ukunxanwa okugqithisileyo, umchamo omnyama, ukudinwa, kunye nokudideka zezinye zeempawu zokuphela emzimbeni. Ukuba umzimba wakho ubonakalisa nayiphi na imiqondiso ngexesha le-gastroenteritis, yiya hydrate kwangoko. Cinga ngesiselo sezemidlalo, isuphu okanye ijusi ... ungaze wenze ikofu okanye iziselo ezinxilisayo okanye ubisi.
Ukwazi ukutya okungavumelekanga kwisidlo esithambileyo se-gastroenteritis kukwabaluleke kakhulu xa uyila isicwangciso sokutya esikunceda ukuba uphinde ufumane ngokukhawuleza.
Kuyacetyiswa ukuba uphephe ukutya okunotye iswekile kunye namafutha, kunye necaffeine, utywala kunye nobisi. Ungabongeza emva kwindlela otya ngayo xa uziva ungcono. Makhe sijonge ukutya ekufuneka kushiywe kukutya okungafunekiyo kwesifo se-gastroenteritis kuba kunokukwenza uzive umbi:
Ubisi (kunye nezinye iimveliso zobisi)
Iimbotyi kunye namandongomane
Amajikijolo (iiblueberries, raspberries, amaqunube ...)
Ikofu (kunye nezinye iziselo ezine-caffeine)
Ubhiya, iwayini kunye nezinye iziselo ezinxilisayo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Kufanelekile » Ukutya okuthambileyo kwesisu
Izibonelelo zokutsiba ngentambo
Iimpawu zommeli wohlobo lwempahla yesinxibo